Budata Fly Simulator maka Windows
Budata Fly Simulator
Budata Fly Simulator,
Enwere ike ịkọwapụta Fly Simulator dị ka simulator ofufe nke na -enye gị ohere inwe oge ntụrụndụ naanị gị na ndị egwuregwu ndị ọzọ nịntanetị.
Na Fly Simulator, nke bụ egwuregwu ịme anwansị na -atọ ụtọ, ndị egwuregwu bụ ndị ọbịa nke ụlọ nri nri ngwa ngwa. Nime egwuregwu, ị nwere ike dochie onye ọrụ na -arụ ọrụ nụlọ nri a ma ọ bụ ijiji ụlọ ma ọ bụrụ na -ịchọrọ. Dabere nakụkụ ị họrọ, ihe ị ga -eme ga -agbanwe. Mgbe anyị ghọrọ karasniek, anyị na -agbalị iri Pizza nime ụlọ oriri na ọ andụ andụ wee kpasuo ndị mmadụ iwe, anyị na -agbalịkwa ịmụba nime ụlọ oriri na ọ inụ inụ ka anyị wee gaa nihu nọgbọ anyị. Mgbe anyị bụ ndị ọrụ, anyị na -alụ ọgụ naanị megide anụ ụlọ niile, anyị na -anwa imebi ha site niji oche, egbe mmiri, shọvel na ihe dị iche iche anyị nwere ike ịhụ gburugburu ka ha ghara iri Pizza.
Na Fly Simulator, otu onye ọrụ nwere ike buso ijiji 10 agha. Mgbe ị na -alụ ọgụ ijiji nụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ndị ahịa gị na -agbalị iri nri, mana ebe ọ bụ na ijiji bụ ihe kacha gị mkpa, ị nwekwara ike tinye oche na shọvel nisi ndị ahịa gị iji gwepịa ijiji.
Obere usoro chọrọ nke Fly Simulator bụ dị ka ndị a:
- Windows XP sistemụ arụmọrụ
- 2 GHz Dual Core processor (Pentium D ma ọ bụ ka mma)
- 2 GB nke RAM
- Intel HD 4000, Nvidia GeForce 8800, kaadị eserese ATI 1950
- 1 GB nke nchekwa efu
- DirectX 9.0c kaadị ụda dakọtara
Fly Simulator Ụdịdị
Mmepụta: HFM Games